I-China Auto Parts Brake Pads yeVOLVO 822-1120-0 yokwenziwa kunye nefektri | Yihaojia
Iipreyiti zebreyiki zibonakalisa ipleyiti yokuxhasa isinyithi kunye nezinto ezinobunzima ebusweni bayo obucinezela ngokuchasene nomphezulu we rotor umphezulu ukumisa isithuthi sakho. Bacinezelwe yi-briper caliper xa ifumana uxinzelelo lwe-hydraulic kwi-cylinder eyintloko. Iipreyiti zebreyiki ngokwendalo ziyawohloka ekuhambeni kwexesha, kodwa kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kwiipateni zabo zokunxiba. Ukuba iipleyiti zebreyiki ziyancwina okanye zisila, inokuba ziye zanxiba kwipleyiti exhasayo, enokuthi yenze umonakalo kwirotor. Iipreyiti zebreyiki ezinxiba ngokungalinganiyo zinokubonisa ingxaki kwi-briper caliper yakho okanye kwizikhonkwane zesikhokelo. Xa iipads zakho zokuqhekeza zifuna ukutshintshwa, unokuqaphela ukuba imoto yakho iyangcangcazela okanye ihlaba xa ubamba. Oku kunokubangelwa yirotor ejijekileyo, ke kungcono ukubuyisela zombini xa ugqibezela umsebenzi wokuqhekeza. Xa ulungele ukulungisa iibhuleki zakho, jonga ii-O'Reilly Auto Parts. Siphatha iiphedi zokuqhekeza, iirotors eziqhekezayo, izixhobo zokuqhekeza, kunye nokunye ukulungisa ngokupheleleyo.
Qaphela ukuba iipads zeceramic azithinteli iirotors ekubeni zisonge. Ukuba umqhubi usebenzisa kakubi okanye etshisa iibhuleki zemoto, iirotors ziya kudilika. Ezinye iziqhoboshi zokuphucula ubushushu ziphucule ukusasaza ubushushu, ezinokuthi zincede ekuthinteleni ukulwa, kodwa kuphela kwinqanaba elithile kuba akukho ndlela yokuba iirotors zikhululwe ngokupheleleyo ekubeni zingajijeki. Ke, phatha iziqhoboshi zesithuthi ngononophelo ngokuphepha ukubamba iziqhoboshi ezinzima xa kunokwenzeka.
Nokuba unesithuthi esinee-brake pads ezintsha okanye ezitshintshayo, yiya lula kwiipads ekuqaleni. Ngeepads zokuqhekeza iiceramic, licebo elilungileyo ukuthintela ukumisa ngokukhawuleza okanye ukubamba iziqhoboshi kakhulu ubuncinci kwiikhilomitha ezimbalwa zokuqala.
Umenzi ngamnye wephedi yokuqhekeza uya kuba nengcebiso eyahlukileyo malunga nexesha lokutshintsha iipads zakho zokuqhekeza isithuthi. Ukanti, iivenkile ezininzi zibongoza abanini beemoto ukuba bathathe indawo yeebrake pads xa kuphela iipesenti ezingama-20 zobukhulu bokuqala zihlala okanye naphina ukuya kuthi ga kwiimayile ezingama-70,000.
I-VOLVO XC90 Intuthuzelo 2016-
IVOLVO S90 2017-
I-VOLVO S90 Intuthuzelo 2017-
IABS 35151 35151
AK AN-943K I-AN943K
Ukuqhaqha i-APEC PAD2130 PAD2130
IBORG kunye NOKUQALA Imgubo Imgubo
IBREEMBO P 86 027 P86027
IBREEMSI Iipesenti Iipesenti
ICIFAM 822-1120-0 82211200
I-FMSI Isixhobo se-D1865-9094 Iifayile ze-D18659094
GALFER ukuhambelana namazwi B1.G120-1362.2 B1G12013622
UKUHLEBISA 6121536 6121536
Intetho yegama lokuqala ICER 182272 182272
I-LPR I-05P2004 I-05P2004
IMINTEX MDB3839 MDB3839
IPHEPHA T2515 T2515
UKHUSELEKO Inkqubo PRP1928 Inkqubo PRP1928
R UKUQhekeza RB2272 RB2272
SB I-SP4024 I-SP4024
ISICATSHULWA 2231701 2231701
UKUTHEMBELA Ukutshintshwa 11200
fri.tech. Ukutshintshwa 11200
Egqithileyo Iipads zokuqhekeza ngokuzenzekelayo zeJAGUAR 9090-D1861
Okulandelayo: I-D2025 Brake Pads Auto Parts ye-BUICK Iinxalenye zeeMoto (23145351)
Auto wazaphula Pad
Iipads zokuqhekeza ngokuzenzekelayo
I-Car Auto Brake Pad
Iipads zokuqhekeza iimoto ngokuzenzekelayo
Iphepha lokuPhula iMoto
Iipads zokuqhekeza imoto
Umgangatho olungileyo weZithuthi eziMiselweyo zeCandelo lokuQulunqwa kweCera ...
D888 SEMI-METAL Formula waqhekeza Pads Auto Izahlulo f ...
D823 SEMI-METAL Formula waqhekeza Pads Auto Izahlulo f ...